Nyanzvi Dzakadzidza Dzinobvuma Here Kuti Jesu Akamborarama? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikongo Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Nyanzvi dzakadzidza dzine uchapupu hwakasimba hunoita kuti dzibvume kuti Jesu akamborarama. Nyanzvi dzinoongorora nhoroondo dzezvakaitika kare dzakararama muzana remakore rokutanga uye rechipiri dzakataura nezvaJesu nevaKristu vokutanga-tanga mubhuku rinonzi Encyclopædia Britannica ya2002 kuti: “ Mabhuku akasiyana-siyana anoratidza kuti kare kare kunyange vaya vaishora chiKristu havana kumbobvira varamba kuti Jesu aivako. Nyaya yokuramba kuti Jesu aivako yakatozotanga mumakore okuma1700 ava kunopera kusvikira pakutanga kwema1900, uyewo hapana umboo hunotsigira kuti Jesu haana kumbobvira ararama. ”
Muna 2006, bhuku rinonzi Jesus and Archaeology rakati: “ Hapana nyanzvi yakadzidza inovimbwa nayo inoramba kuti muJudha ainzi Jesu mwanakomana waJosefa haana kumbobvira ararama; vakawanda vanobvuma kuti tava nemashoko akawanda anotibatsira kuti tizive dzidziso dzake uye mararamiro aaiita. ”
Bhaibheri rinoratidza kuti Jesu munhu akamborarama. Rine mazita edzinza raakabva uye evemumhuri yake. (Mateu 1:1; 13:55) Rinotaurawo mazita evatongi vakanga vakakurumbira avo vakararama panguva imwe chete naJesu. (Ruka 3:1, 2) Mashoko iwayo anobatsira vaongorori kuti vaone kururama kwenyaya dziri muBhaibheri.
Vaongorori vemazuva ano uye vekare vanotiwo kudii nezvenyaya iyi?